Macaamiisha Amal Express oo ilmo qubatay markii lacagahoodii laga xanibay - Khilaaf iyo dacwo
Topnews:-Macaamiisha Amal Express oo ilmo qubatay markii lacagahoodii laga xanibay - Khilaaf iyo dacwo
20 June 2013 Waagacusub.com-Amal Express ayaa xanibtay lacago u yaalay Boqolaal Somalia kadib markii khilaaf xooggan uu dhexmaray wakiilka AMAL ee New Zealand iyo Maamulka sare ee AMAL bishii April badhtamaheedii. Khilaafkaas wuxuu sababay in xafiiskii AMAL ee New Zealand gabi ahaantiisba la xiray.
Maamulka sare ee AMAL waxay go’aansadeen inay xayiraan lacagihii uu soo diray wakiilkoodu wixii ay heli kareen, oo ay ka mid tahay lacago lasoo diray xilli khilaafka ka horreeyay oo macaamiishoodu ay dhigteen Bankiga suuqa madoow ama xeer Somaliga ee AMAL. Waxay maamulka AMAL sheegeen inay bilaabeen baadhitaan la xidhiidha lacagihii wakiilku soo diray, arrinkaas oo macaamiishu ay ku qadariyeen xawaaladda wakhtina ku siiyeen inay soo baadho arrinta.
Hase yeeshee laba bilood ka badan iyadoo laga soo wareegay ayaan ilaa hadda wax war ah oo cad laga haynin AMAL, lacagihii macaamiishana ay sidoodii u xayiran yihiin, arrintaas oo dhibaato xoog leh u geysatay macaamiishaas. Waxaana macaamiishu aaminsanyahiin in AMAL Express ay raadinayso xirfad iyo xeelad ay kula wareegto lacagahaas si ay u yarayso wixii khasaaro kasoo gaadhay xidhitaanka xafiiskooda dalka New Zealand.
Mar aan khadka taleefanka kula xidhiidhay Maamulaha AMAL Express Mudane Axmed Warsame oo ku sugan Dubai, wuxuu ii xaqiijiyay inay xayireen lacago macaamiisha loo soo diray iyo lacago u taallay Bankiga AMAL uuna baadhitaankoodii weli socdo.
Maamulaha wuxuu codsaday in la siiyo 14 maalmood si ay lacagaha u bixiyaan hasse yeeshee waqtigii balanta kadib markii aan la xiriirnay telefoonka nagama qaban.
Maamulaha wuxuu lacagta maqan ku sheegay Nus Milyan Dollar.
Waxaa haddaba is weydiin leh sidee khilaafka AMAL iyo wakiil ka mid ah wakiiladeeda saamayn ugu yeelan karaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan macaamiisha AMAL oo dhan?? Jawaabta su’aashaas weyn waa sidatan:
Xog waagacusub.com heshay ayaa sheegaysa in qaar ka mid ah macaamiisha AMAL oo jooga dalka Isutaga Emaaraadka Carabta (UAE) ay u dacwoodeen Bangiga Dhexe ee dalkaas (Central Bank of UAE) iyagoo kaga dacwoonaya lacagaha ay AMAL uga xayirtay sida sharci darrada ah, waxay dalbadeen in lacagohooda loo fasaxo si deg deg ah, magdhow looga qaado AMAL ku salaysan intii ay xayiraada ku haysay lacagtooda, ugu dambayna talaabo sharci ah laga qaado shirkadda.
Dacwaddaas oo gaadhay Central Bank of UAE wuxuu bangigu u saaray guddi deg deg ah oo baadhitaan balaadhan kusoo samaynaysa xawaaladda AMAL Express. Dacwadaan waxay Bangiga dhexe ee dalka u caddaysay in AMAL ay jabisay sharciyada “Exchanges” oo ah inay macaamiisha lacagohooda loo soo diro ay farta ka saaraan marka ay macaamiisha aqoonsigooda shakhsiyeed xaqiijiyaan. Dacwadaan waxay kaloo Bangiga dhexe ee dalka ku baraarujisay in AMAL Express ay jabisay sharciyada dalka ee nidaamiya xawaaladaha iyo shirkadaha sarrifka kuwaas oo ay ka mamnuuc tahay inay dadweynaha accounto u furaan oo lacago u hayaan oo sidii Bangi u shaqeeyaan. Sarkaal Bangiga Dhexe ee UAE u shaqeeya oo aan khadka taleefanka kula xidhiidhay wuxuu yidhi"AMAL KIISKEEDA WAAN BAAREEYNAA,HADII LAGU HELO INAY NIDAAM BANK DAD UGU FUREEN KOONTIYANA SHARCIGA AYEY JIBIYEEN”. Hadalka sarkaalka Bangiga Dhexe wuxuu caddaynayaa in AMAL Express Shatti geeda “Trade Licence” keedu ku koobanyahay lacag dirid, lacag bixin iyo lacag sarriffid oo kaliya, wixii ka baxsan intaas haddii shirkaddu ay ka shaqayso waxay samaysay sharci darro xooggan oo keeni karta in Central Bank of UAE uu xayiraad kusoo rogo hawlaha AMAL oo dhan oo laga mamnuuco shaqada ama ugu yaraan laga qaado AMAL ganaax badan oo gaadhi kara boqollaal kun oo Dollar.
Arrinkan wuxuu caddaynayaa in Lacagaha macaamiisha u taalla AMAL Dubai oo dhan khatar ay ugu jirto in Central Bank of UAE uu xayiro muddo dheer, ka dibna macaamiisha AMAL oo dhan dhibaato xoog leh la kulmaan, tasoo la mid noqon karta dhbaatadii sannadaha socotay ee ku dhacday macamiishii xawaaladda Barakaat.
Taas waxaa kasii daran in haddii xayiraad lagu soo rogo hawlaha xarunta AMAL ee Dubai, hawlaha shirkadda oo dhan ee daafaha caalamku ay fadhiisanayaan, AMAL Express inay xitaa sii jiri karto shirkad ahaan shaki weyn ayaa ku jira markaas, lacagaha macaamiisha account da ugu jirta oo dhanna way lumi karaan.
Sidoo kale mar haddii ay sharci darro AMAL ku furtay accounto, lacagaha ku jira accountada wax sharci ah oo dalka UAE u yaalla oo u ilaalinaya macaamiisha ma jirto haddii ay lacagtaas ku lunto AMAL waayo accountoda ayaaba marka hore sharci darro iyo si suuq madow ah AMAL ay ugu furtay macaamiisha.
Waxaa sannadahan dambe soo badanayay kicitaanka xawaaladaha soomaaliyeed iyo khasaaraha kasoo gaadha macaamiishooda gaar ahaan macaamiisha xawaaladaha lacagta ku kaydsada ee sidii bangi u isticmaala.
Xawaaladaha kacay waxaa ka mida Barakaat oo maraykanku xidhay lacag bandanna ku luntay, Dalsan iyo Qaran oo labadaba burbur kasoo gaadhay khilaaf ka dhexyimi saamileyaasha xawaaladahaas. Mar kasta oo xawaalad dhexdeeda khilaaf ka dhaco ama ay kacda waxaa ku luma hanta fara badan oo shacabka soomaaliyeed ay u hayeen xawaaladahaas.
Waxaa kaloo dhacay marar badan oo aan lasoo koobi Karin in wakiilada u fadhiya xawaaladaha xafiisyadooda ku kala yaalla daafaha caalamka ay is khilaafaan xawaaladaha oo xisaab la isku mari waayo ka dibna wakiiladu ay la baxsadaan lacag ay macaamiishoodu ugu dhiibteen amaanno ahaan iyagoo ku tixgalinaya xawaaladda ay u shaqeeyaan. Macaamiisha dhibta iyo khasaaruhu kasoo gaadhay falalka wakiiladaas badanaa kama helaan tixgalin iyo magdhow xawaaladaha.
Falalkaas foosha xun kuma koobna xawaalad qudha ama dal kaliya ee waxay saamaysay xawaalado fara badan xafiisyadooda ku yaala dalalka kala ah Kenya, Ethiopia, South Africa, USA, Italy, iyo kuwo kaloo badan. Haddaba falkii ugu dambeeyay ee la xidhiidha khilaafaadka xawaaladaha iyo wakiiladooda wuxuu ka dhex dhacay xawaaladda AMAL Express iyo wakiil kooda u jooga dalka New Zealand.